कर्मथलो जापान बनाएका भुवनले गीत मार्फत पस्किए जन्मगाँउको माया !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
कर्मथलो जापान बनाएका भुवनले गीत मार्फत पस्किए जन्मगाँउको माया !
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : आइतवार, फाल्गुन १८, २०७६
काठमाडौँ- बाग्लुङ गलकोट नगरपालीका वाड न ९ अर्थात साबिकको मल्म गाबिस वाड न २ रिस्मीको माथी देउराली र टापु नाम गरेको सामुदायिक बन जङ्गल रहेको छ । रिस्मी गाँउका मानिसहरुले घाँस दाउरा गर्ने यहिनै जङ्गलमा गर्ने गरेका छन् ।
सोहि गाँउमा जन्मिएका गायक तथा सर्जक भूबन सापकोटाले आफ्नै गाउँ घरलाई सम्झेर नेपाली लोकदोहोरी गीत देउराली बजारमा ल्याएका छन् ।
१ दशक अगाडी सम्म देउराली र टापुमा बसोबास गरेका सापकोटा अहिले भने जापानमा रहेका छन् । लगभग सबैजसो मानिस कुनै न कुनै कामको लागि देउराली र टापु मा पुगेका छन् । तर आज त्यही गाँउका मानिसहरु लगभग सबैजसो विदेश हानीएका छन।
५०० को हाराहारीमा एउटै टोलका युवायुवतीहरु जापानमा मात्रै काम गर्न पुगेका छन् भने अन्य मुलुक अमेरिका, बेलायत, युरोप लगायत ठाँउमा पनि त्यहाँबाट पुगेका छन् ।
आज गाँउ लगभग रित्तै जस्तो बनेको छ, बिकास र सुबिधा थपिदै गएका छन तर पनि बस्ने मानिस अझै पनि घट्दो क्रममा छन् । रोजगारको शिलशिलामा त्यही रिस्मी गाँउबाट जापान पुगेका भुवनले यतीबेला बिदामा नेपाल आएर त्यहीँ गाँउ र टोल का शब्दहरु जस्ताको तस्तै टिपेर लय मार्फत देउराली र टापु नामको गित पस्किएका छन् ।
जुन गितको छायाङ्कन पनि सोही गाउँमै पुगेर सबै बास्तबिकता हरु देखाएर गरिएको छ । देउराली र टापु गित ब्यबसायिक भन्दा पनि आफु जन्मेको गाँउप्रतीको मायाको रुपमा पस्किएको सापकोटाले बताएका छन्।
भिडियोमा सापकोटाको लय, शब्द, अभिनय आफैले गरेका छन् । सापकोटालाई गायिका मिना अधिकारीले आवाजमा साथ् दिएकी छिन् ।
जनता डिजिटल एण्ड फिल्म्सले बजारमा ल्याएको उक्त भिडियोको निर्देशन सिर्जन बरालले गरेका हुन् । भिडियोमा गायक सापकोटालाइ पुजन घिमिरेले अभिनयमा साथ् दिएकी छिन ।
थोरै समयमा चर्चा बटुल्न सफल भएको भिडियोको दिपक गिरीले छायांकन रहेका हुन् भने भिडियोको सम्पादन अमृत चापागाईले गरेका छन् ।